Kushanda neZvapupu zvaJehovha kuWarwick, New York
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Catalan Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fante Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Italian Javanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malay Malayalam Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Oromo Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Thai Tiv Turkish Ukrainian Urdu Valencian Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Kushanda neZvapupu zvaJehovha kuWarwick
Vanhu vakawanda vaishamiswa chaizvo pavaicherechedza kuzvipira kwaiitwa nevashandi pabasa rekuvaka riri kuitwa kuWarwick. Mukuru mukuru weimwe kambani yakaisa maelevator akaudza mumwe wevashandi vacho kuti: “Vanhu venyu vari kuita zvinogara zvakadaro. Vanhu vakawanda mazuva ano havawanzozvipira kushanda vasingabhadharwi.”
Mukuru mukuru uyu nevamwewo pavakanzwa kuti, vakawanda vevanhu vaiita basa rekuvaka pamahofisi makuru eZvapupu zvaJehovha kuWarwick, New York, vaiva vashandi vanozvipira, vasingatarisiri kubhadharwa, pakutanga vakafunga kuti vashandi ivavo vaingovawo Zvapupu zvaigara pedyo pedyo zvaiuya kuzoshanda pakupera kwevhiki chete. Vakashamiswa pavakaonana nevanhu vakanga vatoita zvekusiya mabasa avo uye vakanga vabva kumativi mana munyika yacho kuti vauye kuzoita basa iri kwemwedzi yakawanda, vamwe kwemakore chaiwo.
Pakazopera gore ra2015, Zvapupu zvinenge 23 000 zvakanga zvatombozvipira kushanda paWarwick pamwe chete nemhuri yeBheteri yekuUnited States. Vamwewo vashandi vanosvika 750 vasiri Zvapupu zvaJehovha, avo vanoita basa rekuvaka, vakabatsira pakuita kuti basa iri ripere nenguva. Kuswera vachishanda neZvapupu zvaJehovha kwakaita kuti vawedzere kuvanzwisisa uye kuvafarira chaizvo.
Mumwe maneja weimwe kambani inogadzira mahwindo nemafuremu ekuganhura mahofisi akanyora kuti : “Munhu wese wepakambani pedu akashanda pabasa iri akashamiswa zvikuru neunhu hwevanhu vavaishanda navo. Izvi ndizvo zviri kuita kuti vakawanda vedu tide kushanda pano.”
Imwe kambani yakatumira vashandi kuti vabatsire pakuvaka midhuri yedzimba dzekugara. Basa ravo ravaiita parakapera, vashandi vavo vatatu vaitoda kuramba vachishanda paWarwick. Vakabva vasiya basa vakatanga kushandira imwe kambani yakanga ichiri kuita basa kuWarwick.
Unhu hwechiKristu hwairatidzwa neZvapupu hwakabatsira zvikuru vamwe vashandi. Mumwe murume aishandira kambani yaiisa faundesheni yezvivako zvacho. Pashure pekushanda kuWarwick kwemwedzi mishomanana, mudzimai wake akaona musiyano pamafungiro ake uye matauriro ake. Afadzwa nazvo akataura kuti, “Ava kutoita kunge asiri iye!”
“Madzimai eZvapupu Akanga Achitouyawo”
Zvapupu zvakawanda zvaishanda panzvimbo iyi vaiva vakadzi. Vaisangoita mabasa akadai seekudhiraivha mabhazi, kutsvaira mudzimba, uye kushanda mumahofisi, asi vairatidzawo mota kwekuenda, vaifambisawo michina yekucheresa neyekutakurisa zvinhu, vaibatanidzawo tambo dzinonzi fiber-optic, kuputira mapaipi, kuplaster, kuisa pombi dzemvura, uye kudira kongiri. Vaishanda zvekushanda zviya.
Mumwe murume asiri Chapupu uyo aiita basa rekuturika denga akaona kuti varume nemadzimai avo pavaiburuka mumabhazi, vamwe vavo vaifamba vakabatana maoko vachiuya kubasa. Zvakamubata chaizvo. Akacherechedzawo kuti madzimai aishanda nesimba chaizvo pabasa racho. “Uchitanga kuvaona waigona kufunga kuti zvimwe vari kungoperekedza zvavo varume vavo,” akadaro. “Asi kana vava pabasa, vairova basa sebasa! Ndakashanda pamabasa akawanda ekuvaka muno muNew York City, asi handisati ndamboona zvakadai.”
Chando cha2014/2015 chakatonhora zvakanyanya, zvokuti wakanga uri muedzo chaiwo kuti munhu ubve pamba uchienda kubasa kwawaizoswera uchishanda panze uchirohwa nechando. Jeremy, mumwe murume Chapupu aishanda achitungamirira basa rekuvaka anoyeuka kuti: “Mamwe mazuva pakwaitonhoresa, mumwe foromani weimwe kambani yekuvaka aimbobvunza kuti, ‘Madzimai enyu achauya here kubasa mangwana?’
“‘Kunyange vaya vaya vanenge vakamira panze vachiratidza mota kwekuenda?’
“Pava paya akataura kuti akaudza varume vaaishanda navo kuti vaifanira kuuya kubasa nekuti madzimai eZvapupu akanga achitouyawo!”
Vatyairi Vemabhazi Vakanakidzwa Chaizvo Nebasa Ravo
Vatyairi vemabhazi vanopfuura 35 vakahayiwa kuti vatakure vanhu vachivaendesa kuWarwick nekuvadzosa kwavaigara.
Mumwe musi bhazi risati rasimuka mumwe mutyairi akasimuka akabva atarisa vanhu vaiva mubhazi. “Ndiri kunakidzwa nekukutakurai,” akadaro. “Ndinokumbirawo kuti mutumire bhosi wangu e-mail muchimuudza kuti munoda kuti ndirambe ndichikutakurai. Ndadzidza zvakawanda nezveBhaibheri kubva kwamuri. Ndisati ndasangana nemi, ndaisatomboziva zita raMwari kana kuti panyika pachava neparadhiso. Handichatyi rufu. Izvi handimbofi ndakazvikanganwa. Muchandiona ndauya kuImba yenyu yeUmambo musi wandinenge ndisiri kuenda kubasa.”
Damiana, mumwe mukadzi Chapupu aishanda kuWarwick, akati: “Pashure pekunge takwira bhazi mumwe musi, mutyairi wedu akati aiva nemashoko aaida kutiudza. Akataura kuti akanga atyaira Zvapupu zvinosvika 4 000 achivaendesa nekuvadzosa kwataivaka kwakasiyana-siyana muNew York. Akati: ‘Munhu wese ane zvimwe zvaanoita zvinotogumburawo vamwe, asi vanhu imimi munotaurirana monzwisisana, moramba muchishanda mose zvakanaka-naka. Izvozvo zvinhu zvakanaka chaizvo.’ Akataurawo kuti aifarira kutaura nesu.
“Apedza kutaura, chimwe Chapupu chaiva mubhazi chakabvunza kuti, ‘Munofarira here kunzwa tichiimba?’
“Akabva aseka zvake akati, ‘Ehe! Ngatitangei nerwiyo nhamba 134.’” *
^ ndima 22 Rwiyo nhamba 134, rwuri mubhuku rinonzi Imbirai Jehovha, rwune musoro unoti, “Ona Uripo Zvose Zvava Zvitsva.” Rwunotsanangura mufaro uchawanikwa nevachapinda munyika itsva yaMwari.
Mapikicha okuWarwick Chikamu 4 (May Kusvika August 2015)